Jurgen Klopp: Waa Lanoo Xoog Sheegtay, Waanan Hambalyaynayaa Aston Villa – Heemaal News Network
Liverpool ayaa bahdilaad weyni kasoo gaadhay kulankii ay xalay fiidkii martida ugu ahayd Aston Villa, waxaana lagu karbaashay 7-2, taas oo noqotay guul-darro taariikhi ah oo tababare Jurgen Klopp aanu illoobi doonin.
Ciyaartoyda Liverpool ayaa ahaa kuwo aan kulankaba usoo diyaar gaboobin oo iska daawanayay ciyaarta, waxaana aan jirin khadka dhexe iyo difaaca, halka weerarkuna ay wiiqnaayeen oo ay tabayeen Sadio Mane oo ahaa laacibka kaliya ee safkii garaacay Arsenal ka maqnaa marka laga reebo goolhaye Alisson Becker oo isagana booskiisu bannaanaa.
Tababare Jurgen Klopp ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay waxa uu sheegay in qaladaad badan ay dhaceen, si dhab ahna loogu awood sheegtay ciyaartoydiisa, isaga oo hambalyeeyey Aston Villa.
“Haa, waan arkayey, waanay ii fududdahay inaan aamino (burburka kooxdiisa) sababtoo ah halkan ayaan joogay. Marka ugu horreysa, waa inaad sheegto in Villa ay si wanaagsan u shaqaysay. Jidhkooda ayay si aad ah u isticmaalayeen, waxay ahaayeen xarfaan iyo inay yoolkoodu ahaa goolka, anaguna intaba maanaan lahayn.” Sidaas waxa yidhi Jurgen Klopp oo warbaahinta la hadlay kaddib fadeexaddii soo gaadhay kooxdiisa.
Klopp oo hadalkiisa sii wata waxa uu ku dooday in kooxdiisuba samaysay fursado ay ka faa’iidaysan weyday, laakiin in laga dhaliyo toddoba gool ay muujinayso qaladaad badan oo ay ciyaartoydiisu sameeyeen, waxaanu yidhi: “Fursado waaweyn oo aanaan ka faa’iidaysan ayaanu helnay, laakiin marka lagaa dhaliyo toddoba gool ma hubo in aanu ka dhigi karaynay 7-7. Qaladaad aad u badan ayaanu samaynay iyo kuwo waaweyn oo cad. Waxay ka bilaabantay goolkii koowaad iyo goolashii ku dhowaa, waxa aanu samaynay qaladaad waaweyn.”
Macallinka reer Germany waxa uu hoosta ka xariiqay waxyaabaha sababay in goolasha badan laga dhaliyo kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Waxa aanu kubadda ku luminaynay aagga qaladka ah, si fiicanna iskagamaanaan ilaalinayn.”